Akụkọ - Tennessee State Parks na-anabata Ahụmịhe Igwe Igwe Igwe Igwe na Tennessee niile
Ogige Ugwu Tennessee ewebatala na Ahụmịhe Igwe na Tennessee (BRAT) ga-abụ oge dijitalụ ọnwa 12 a maka ọdịmma na nchekwa nke ndị na-agba ịnyịnya na ndị ọrụ ogige.
Jim Bryson, onye osote kọmishọna nke Tennessee Division of Setting and Conservation kwuru, sị, "Ọ bụ oge dị mma maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè na steeti anyị niile, na usoro dijitalụ ga-enyere mmadụ niile aka isonye ebe ha na-arụ ọrụ iji wezuga mmekọrịta mmadụ na ibe ya." "Ọ bụ ihe ngwọta iji chebe zaa onwe zaa Otú o sina dị irube isi Atụmatụ na nwayọọ nke COVID-19."
N'okpuru usoro dijitalụ nke oge ọnwa, Sept. 1-30, ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịbanye kilomita ha na lovetoride.internet dị ka akụkụ nke Ahụmịhe Bọọlụ N'ebe niile Tennessee Biking Ndị otu. Ebumnuche bụ maka ndị nyere aka njem 688 kilomita, ohere sitere na Bristol ruo Memphis, n'ime ọnwa nke Septemba. Ebe ọ bụ na ọnwa iri na abụọ a bụ iri atọ na atọ kwa afọ Ahụmịhe igwe kwụ otu ebe na Tennessee, ndị otu a nwere ebumnuche nke kilomita 31,000.
Ruo ugbu a, ndị na-agba ịnyịnya ga na-agba ịnyịnya na-aga n'ihu. Njem dijitalụ ahụ na-agba ndị na-agba ume ka ha nọgide na-eji ya na ihe mgbaru ọsọ ha na mpaghara ịntanetị na ụzọ ndị ọzọ na steeti. Njem a abụghị asọmpi.
Pricegwọ isonye bụ $ 150. Ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịdebanye aha na https://tnstateparks.com/blog/the-bicycle-ride-across-tennessee-is-brining-riders-together-virtually ma sonyere BRAT na ibe weebụ Fb ya.
Ndị nkwado niile ga - enweta:
Banye na ụzọ ndị a tụkwasịrị obi site na BRAT gara aga na ọtụtụ Parks Tennessee State Parks site na Ahụmahụ na GPS
Uwe 2020 BRAT na uwe elu
O tozuru oke iji nweta ihe nrite site na Septemba
Banye maka ịkpọ oku-naanị otu obere ndị njem dị na steeti Tennessee yana onye isi BRAT
Ohere iji wuo njem mmadụ gị n'otu n'otu gafee ụzọ ndị enyere na ebe obibi na Tennessee State Parks
Ohere iji nweta obi uto site na omume ogige na ngwungwu eduzi ka ị ga-ahụ na Ahụmịhe igwe kwụ otu ebe na Tennessee
Ndi mmadu aghaghi ibi na Tennessee ka ha sonye ma nabata ha ka ha banye otutu ma obu uzo ha choro, tinyere uzo ndi ozo, ime ime ulo, okwute ma obu igwe.
Ihe a na-enweta na-aga ihe omume na nchekwa nke Cumberland Path, ụzọ ụkwụ dị narị kilomita atọ site na mgbada ugwu nke Ugwu Cumberland, na Tennessee Park Rangers
Mgbakwunye, nke na-enye ndị nkuzi na ịnye ọzụzụ maka ndị na-elekọta ogige n'ofe steeti niile ịga n'ihu ụlọ akwụkwọ iji nwee ike iweta ogo nchekwa kachasị mma maka Parks Tennessee State.